एमाले ब्युँतियपछि मध्यरातमा ओलिको ड*रलाग्दो गर्जन, वलिकाे तस्ताे चेता*वनी पछि सबै नेताहरुकाे भागा*भ | Public 24Khabar
Home News एमाले ब्युँतियपछि मध्यरातमा ओलिको ड*रलाग्दो गर्जन, वलिकाे तस्ताे चेता*वनी पछि सबै नेताहरुकाे...
एमाले ब्युँतियपछि मध्यरातमा ओलिको ड*रलाग्दो गर्जन, वलिकाे तस्ताे चेता*वनी पछि सबै नेताहरुकाे भागा*भ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्। उनले बालुवाटारमा दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मान्यता नदिएपछि दुई पार्टी ब्यूँतिएका छन्।
अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र आ-आफ्नो कित्तामा लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका हुन्। यद्यपी आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयहरुका नियमित एजेण्डामाथि छलफल र निर्णय हुने बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ।
संसदमा तत्लकालिन एमालेका १२०, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्‍त्र हैसियतमा छन्। पार्टी विभाजन भएसँगै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ओली सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्। जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएको छ। त्यसमाथि नेकपाको आधिकारिकतासमेत ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
Previous articleभर्खरै माधव नेपाले गरे ठुलो निर्णय: प्रचण्डलाई छोडेर ओली समुहमै फर्किए, ओली समेत च*कित् ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleभर्खरै हेर्नुहोस, फेरि ओलीले गरे यस्तो घोषण: नयाँ अभियानको शूरुवात Pm Kp Sharma Oli. (जानकारीका लागि सेयर गराै)